Let's Go and Walk to Our Brighten Future.: May 2009
မေလ ၃ဝ ဒီပဲယင်း (၆) နှစ်ပြည့် အထူးအစီအစဉ် အဖြစ် ကိုယ်တွေ့၊ဖြစ်ရပ်မှန်များ
Truck Driver Report arrluelay
Killing Festival arrluelay
Preliminary Report arrluelay
Eyewitness Report arrluelay
Publish at Scribd or explore others: Non-fiction report 9/11
Posted by yahutha at 11:41 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ဖို့ အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း ဖတ်ရန်
ဒီပဲယင်း (၆) နှစ်ပြည့်ချိန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားစွဲခံနေရ ဖတ်ရန်
ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်မှု ၆ နှစ်ပြည့်တိုင် အရေးမယူသေး ဖတ်ရန်
ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း (၆) နှစ်ပြည့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီမှာ ဆွမ်းသွတ် ဖတ်ရန်
ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ် ဥပဒေရှုထောင့်မှ သုံးသပ် ဖတ်ရန်
ထိုင်းလွှတ်တော်အမတ်များက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို ဖတ်ရန်
စုအတွက် ၆၄ အမည်ရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှု ထွက်ပေါ်လာ ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက ရုံးတင်တရားစွဲတာ အာဆီယံ သိက္ခာကျ ဖတ်ရန်
စစ်အစိုးရကြောင့် အာဆီယံ မျက်နှာပျက် ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု စစ်ဆေးသည့် (၉) ရက်မြောက်နေ့ သတင်းများ ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု အပြီးသတ်လျှောက်လဲရန် ရက်သတ်မှတ်၊ အင်းစိန်ဈေးရှေ့ တကိုယ်တော်ဆန္ဒ ပြသူတဦး ဖမ်းဆီးခံရ ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်အရေးယူမည်ဟု နအဖတုံ့ပြန် ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှု တရားခွင်ထွက်ဆိုချက်များ နအဖသတင်းစာတွင် အပြည့်အစုံ မဖော်ပြ ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေးအားနည်း ဖတ်ရန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှတ်ရေး ဆန္ဒပြသူ အဖမ်းခံရ ဖတ်ရန်
အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်ပွဲ ၁၉ နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားပြုလုပ် ဖတ်ကြည့်ချင်သေးလား....
မစ္စတာယက်တောက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆို ဖတ်ကြည့်ချင်သေးလား....
Posted by yahutha at 2:07 AM0comments
Posted by yahutha at 4:06 PM0comments
တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလား ထူထောင်ထားသည့် “၀ါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့” မှ အဖွဲ့ဝင်များ မေလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၊ မာရာကက်မြို့တော်တွင် တွေ့ဆုံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်၊ မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆို
(၀ဲမှယာ) - ဖာနန်ဒိုဟင်းရစ်ကာဒိုဆို (ဘရာဇီးသမ္မတဟောင်း)၊ ဂျင်မီကာတာ (အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း)၊ အလာဘက် (SEWA အဖွဲ့ တည်ထောင်သူ)၊ မေရီရော်ဘင်ဆင် (အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်းနှင့် UNHCR အကြီးအကဲဟောင်း)၊ တောင်အာဖရိက ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူး၊ ဂရိုဘရန့်လန်း (နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း)၊ လက်ဒါဘရာဟီမီနှင့် ဂရာကာမချယ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချူပ် (National League for Democracy – NLD) ၏ အောင်ပွဲနေ့(မေလ ၂၇ ရက်) ။
Publish at Scribd or explore others: School Work Other Books Non-fiction History Burma
25-05-2009 NLD(HQ) office မှ ဦးဥာဏ်ဝင်း၏ သတင်းစာလင်းရှင်းပွဲ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ
Publish at Scribd or explore others: School Work Magazines & Newspape newspaper democracy
Publish at Scribd or explore others: Magazines & Newspape Business & Law Law & Government Court Filings Reports
Praying for Daw Aung San Suu Kyi at Singapore Toa Payoh Buddhist Temple on May 24, 2009 Sun.
ကိုမင်းကိုနိုင် လူ့အခွင့်အရေးဆုရရှိသော ဂွမ်ဂျူးမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး လက်မှတ်ကမ့်ပိန်း ( တတိယအကြိမ် - ကိုရီးယား )
From: flyingpeacock 619
Posted by yahutha at 1:25 AM0comments
ဦးဥာဏ်ဝင်း NLD ၁၉ ၀၅ ၂၀၀၉ နေ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမှုအခြေအနေကို ရှင်းလင်းပြောပြချက်များ
အတိုက်ခံအင်းအားစုများ သိရှိစေရန်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ”
ရန်ကုန်ပြည်သူလူထုအခြေနေ့ကတော အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေ့ပြီး စစ်အာဏာရှင်တွေကို ရရာလက်နက်များတိုက်ဖို့ ပြောဆိုနေကြသလို
ရဟန်းသံဃာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြည်သူလူထုကို ၀ိုင်းရန်းပေးကြဖို့
န အ ဖ စစ်အာဏာရှင်များကတော့ ပြည်သူလူထုကို ဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ အာရုံပြောင်းပြုလုပ်ကြောင်းကြားသိရပါတယ်
ကျနော်တို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးချနိုင်ရင်ကောင်းမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ပြည်သူတွေကိုဘောလုံးပွဲမကြည်ဖို့ စည်းရုံးရမယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက အကျယ်ချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုသည့်အပေါ် ဂျပန်ရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ၌ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ချခံထားရသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက အကျယ်ချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုသည့်အပေါ် ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် ရှိနဂါဝါရှိ မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) ရှေ့တွင် ဒီကနေ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြ ပါသည်။ ထို့နောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆိုသည့်အပေါ် ဆန့်ကျင်ကြောင်း ငြာချက်ကို မြန်မာသံရုံး (အခွန်ရုံး) မှ တာဝန်ရှိသူများကို ရှေ့ဝင်ပေါက်မှ အော်ခေါ်၍ ပေးအပ်မည်ပြုသော်လည်း သံအမတ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ ထွက်မလာရဲကြ၍ စာတိုက်ပုံးအတွင်းထည့်ထားခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန် ရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူများ မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသောဂျပန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဂျပန်ဘုန်းတော်ကြီးများ အယောက် ၄၅၀ကျော် တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
写真: 109·枚 – 33 MB
Posted by yahutha at 2:02 AM0comments
Posted by Peaceful Walking at 4:07 PM0comments
Posted by yahutha at 1:41 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း (AAPP) ကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်
DAW SUU's Update for May 14, 20091
Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi is facing the prospect of years in prison after being charged with breaching the conditions of her house arrest. Al Jazeera's Azhar Sukri reports.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အင်းစိန်အထူးတရားရုံးသို့ ခေါ်ထုတ်
Daw Aung San Su Kyi Urgent Release (05!14!2009) Global Action
Daw Aung San Su Kyi Urgent Release (05!14!2009)
John Willam Yattaw ကို US ဒုအတွင်းဝန်နဲ့ တွေဆုံခွင့်ပေးပြီ
John William Yettaw ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း...(Brief biography of John William Yettaw )
Posted by yahutha at 2:19 AM0comments
ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်တနှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနား in tokyo
Posted by yahutha at 1:09 AM0comments
Posted by yahutha at 11:20 PM0comments
မုန်တိုင်းဘေး ကူညီသူများကို အပြစ်ပေးခြင်းမှာမတရားကြောင်း အစီရင်ခံစာထုတ်
မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ အား မတရား အ သင်းဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်နှင့်စပ်လျ ဥ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်
Publish at Scribd or explore others: legal case
Posted by yahutha at 2:19 PM0comments
Thanga and Students
Posted by yahutha at 2:11 PM0comments
MAYDAY JAPAN 2009 ဂျပန် နိုင်ငံ အလုပ်သမားနေ့ ချီင်္တက်ပွဲ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ဂျပန်ဌာနခွဲ မှ ဦးတင်ဦး/ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေး
အကျင်းသား များလွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဂျပန် နိုင်ငံ အလုပ်သမားနေ့ ချီင်္တက်ပွဲ သို့ တက်ရောက် လာကြသော လုပ်သားပြည်သူ များထံမှ လက်မှတ် ကောက်ခံ ခဲ့သည်။